Guddoomiyaha UCID oo ka jawaabay hadal ka soo yeedhay Qaramada Midoobay iyo Maraykanka | Somaliland.Org
Guddoomiyaha UCID oo ka jawaabay hadal ka soo yeedhay Qaramada Midoobay iyo Maraykanka
October 29, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay Guddooomiyaha Guddi-hoosaadka arrimaha Afrika ee Koongareeska Maraykanka iyo Masuul u hadlay Qaramada Midoobay.
Guddoomiyaha Xisbiga UCID wuxuu ka jawaabay hadal ka soo yeedhay Guddooomiyaha Guddi-hoosaadka arrimaha Afrika ee Koongareeska Maraykanka Mr Donald Payne oo uu ku sheegay in khilaaf u dhaxeey Maamul-gobolleedka Puntland iyo Somaliland oo uu maamul ku sheegay. “Waxaan ka hadlayaa nin Senetar ah oo la yidhaahdo Donald Payne oo shalay hadlay oo yidhi, waxa colaadi u dhaxaysaa Somaliland iyo Puntland. Waxaanu u sheegaynaa Donald Payne, anagu waxaanu xad la leenahay Soomaaliya, mana jirto Beel aanu Xad isku haysanaa, ilaa haddana ma ogi Dawladda uu Shariif ka madaxda yahay meel ay ka sheegtay Dhul ay Somaliland ka haysato. Isagana (Donald Payne) waanu u caqli celinaynaa oo waxaanu leenahay, Somaliland Maamul maahee waa Jamhuuriyad.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha UCID oo maanta ka hadlayay Munaasibadda Xuska sanad-guurada 1aad ee Qaraxyadii Hargeysa. Waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Soomaalina ama ha ahaato reer Garowe ama ha ahaadeen reer Kismaayo’e, waxaanu leenahay gacan wanaagsan baanu diyaar idiinla nahay.”
Sidoo kale, waxa uu Guddoomiyaha UCID jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay Masuul u hadlay Qaramada Midoobay oo uu ku sheegay in Dawladda Shariifka ee Soomaaliya kasbatay nabad. “Waxa kale oo aan ka hadlayaa Nin ka tirsan Qaramada Midoobay oo hadlay oo yidhi, Dawladda Shariifku waxay ku tallaabsatay nabadgelyo. Anagu uma aragno inay meeshaasi nabad ka dhacday, malaha iyagu (Qaramada Midoobay) marka Madaafiicdu bataan, ayay nabadgelyo u yaqaanaane.” Ayuu yidhi Guddoomiyaha UCID. Waxaanu Beesha Caalamka ugu baaqay in ay Somaliland xaq u leedahay in looga abaal-gudo nabadgelyada ay kasbatay.